Rooble oo ku dhawaaqay in uusan ahayn musharrax Madaxweyne | KEYDMEDIA ENGLISH
Rooble oo ku dhawaaqay in uusan ahayn musharrax Madaxweyne
Maxamed Xuseen Rooble, waxaa si weyn loo amaanay doorkiisa siyaasadeed, ugu yaraan Sideeddii bilood ee la soo dhaafay, wuxuuna kasbaday taageero xooggan, oo gudaha iyo dibadda ah.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa mar kale ku celiyay in uusan ahayn musharrax Madaxweyne, wuxuuna xusay in is-sharixid la’aantiisu aysan ka dhignayn in uusan lahayn han-siyaasadeed, hayeeshee uu u tanaasulay dalka, maadaama uu gar-haye u yahay amniga iyo doorashada.
Howlaha doorashada ayaa hadda soo gaaray heer gebogebo ah, kadib dadaal iyo shaqo badan RW Rooble galiyay sidii dalka doorasho uga dhici lahayd, wali-se waxa hagid iyo ka war-qab xooggan u baahan amniga, waana sababta ugu weyn ee Ra’iisul Wasaaraha ka hor taagan inuu is sharraxo, maadaama hoggaanka ciidanku ku daaban yahay Farmaajo.
RW Rooble, ayaa sidoo kale, umadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan Ummadda Islaamka ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciidda Barakeysan ee Ciidul Fidriga, wuxuuna shacabka ugu baaqay in ay is caawiyaan, si gaar ahna loo garab istaago qoysaska dan-yarta ah ee aan awoodin in ay farxadda Ciidda u qaataan si la mid ah qoysaska ladan.
“Ciiddu waa munaasabad farxadeed, sidaas darteed waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka Eebbe wax siiyay in la caawiyo dadka danyarta ah, lagana farxiyo iyaga iyo qoysaskooda si ay u dareemaan farxadda Ciidda”. Ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta.
Rooble, wuxuu hore u caddeeyay in uusan ka mid ahayn baratamayaasha sanadkaan u taagan tartanka Madaxweynaha, hayeeshee, labadii bilood ee la soo dhaafay, waxaa si weyn saxaafadda loo soo galiyay inuu yahay musharrax Madaxweyne, yeelkeede, wararkaas xanta ahaa ayaa caawa soo gaba-gaboobay.